pandeyji 26 days ago
chicagoan 26 days ago
Visitor is reading Life getting better in China, Iran and Nepal
Visitor is reading rabbit rapist convicted of cruelty
Visitor from DE is reading बेर्थ आएछु अमेरिका
Visitor is reading I bet it will freak u out....
Last edited: 19-Sep-20 01:44 PM
Posted on 09-04-20 12:23 PM [Snapshot: 1257] Reply [Subscribe]
सुनकेसरिको कथा पत्ता लगाउन सकिन .. तर, मधुमालतिको कथा चाँहि एकजनाले सुनाइदिनुभएको छ । उहाँले भने अनुसार मैले लेख्दैछु - ओरिजिनल कथा भन्दा चाँहि पक्कै पनि फरक हुन्छ होला । अति लामो कथालाइ छोटो बनाउने प्रयास गरिरहेको छु :
** मधु मालतीको कथा ** (अहिले पुरा छैन .. बिस्तारै अरु भाग शेयर गरुँला)
१) यो आज भन्दा धेरै धेरै अघिको कथा हो। त्यसबेला नेपालमा विरबुद्धि नाम गरेका एक राजा थिए। उनका सात भाइ छोरा मध्थे सबै भन्दा कान्छा भाइ मधुकर निकै बाठा थिए। उनले आँफ्ना प्रतापि दाइहरुले गरेका गल्तिबाट शिक्षा लिन्थे, तेसैले उनि झन बढि शक्तिसालि र बुद्धिमान थिए
२) एक दिन, सातै भाई जङ्गलमा सिकार खेल्न गएका थिए। घनघोर जङ्गलमा शिकार खेल्दै गर्दा उनिहरुले सुनका सिङ भएका सात ओटा सुन्दर मृगहरु देखे। ति सात भाइले मृगहरु लखेट्दा लखेट्दै निकै नै पर पुगे। जति वाण हाने पनि नलाग्ने, समाउन पनि नसकिने ति मृगलाइ लखेट्दा लखेट्दै झमक्कै साँझ पर्यो।
३) मृगहरु खोला तरेर पारि पट्टिको जङगलमा पुगेपछि बल्ल राजकुमारहरुले जंगलमा नै हराएको पत्तो पाए। रात परिसक्यो, फर्कने कसरि पनि थाह छैन। बास बस्ने जस्तो ठाउँपनि छैन। मधुकरले एउटा अग्लो रुखमा चढेर चारैतिर हेरे, खोलापारि मृग गए तिर अलि पर मधुरो बत्ति देखियो।
४) खोला तर्न डुंगा नभएपनि मधुकरले उपाय निकाले। खोला तिर ढल्किएको खोला पारिको रुखमा बाँड हाने, दाजुहरुलाइ त्यहि बाँडको टुप्पामा अर्को बाँण हान्न लगाए। यसरि बाँडको पुल बनाएर खोला तरे। निकै बेर हिँडेपछि बल्ल उनिहरु उज्यालो आएको स्थानमा पुगे। उज्यालो ओडार भित्रबाट आएको रहेछ
५) बाहिरबाट हेर्दा एक साधारण ओडार जस्तो मात्रै देखिएपनि अलिक जनिक पुगेपछि उनिहरु आश्चर्यचकित भए । त्यहाँ भित्र त एक बिशाल र आलिशान दरवार पो रहेछ। जंगलको बिचमा एक झिलिमिलि बत्ति बलिरहेको एक सुन्दर र अलौकिक दरवार देख्दा राजकुमारहरु निकै नै हैरान र हर्षित भए।
६) राजकुमारहरुलाइ लाग्यो, त्यहाँ त पक्कै पनि कुनै राजा महाराजा बस्छन होला भन्ने। "भित्र को हुनुहुन्छ? हामी परदेशि। जङगलमा बाटो बिराएर अल्लमल्ल पर्यौं। यहाँ बास पाईन्छ होला?"
भित्रबाट एक महिलाको आवाज आयो।
"हे राजकुमारहरु, मेरो एक शर्त पुरा गर्यौ भने मात्रै बास पाउँछौ"
७) "शर्त सुनाउनुहवस। सम्भव भए मान्छौं।" रात निकै परिसकेको, थाकेर लखतरान परेका राजकुमार जुनसुकै शर्त पनि मान्न तयार थिए।
"तिमिहरुले मेरा सात छोरीहरु बिहे गर्न मन्जुर भए मात्रै बास पाउँछौ।
नत्र पाउँदैनौ। बिहे गर्ने हो भने ढोका खोल्छु, नगर्ने हो भने जताबाट आएका हौ उतै तिर फर्क।"
८) मध्यरातको समय, आरामदायि बिस्तरा छोडेर घनघोर जंगल तिर फर्कन कसैलाइ पनि मन थिएन। भोकले आत्तिएका ति राजकुमारहरुले ति सात बहिनी कन्याहरुको अनुहार नै नहेरि बिहे गर्न तयार भए। तर, जव भित्र बाट ति छोरिहरुकी आमा, बुढी आइमाइ बाहिर निस्किन ति सातै दाजुभाइ नराम्रोसंग तर्से।
९) त्यस्तो राम्रो महलमा हेर्दै तर्साउने, डरलाग्दो अनुहार भएकि कुटुनि बुढि बस्छिन भन्ने त उनिहरुले सपनामा पनि चिताएका थिएनन। अझ, त्यस्ति डरलाग्दि आइमाइका छोरिहरु झन कति कुरुप होलान भन्ने सोचले नै तिनिहरुलाइ उल्टी आउला जस्तो भयो। उनिहरुलाइ डरले झपक्कै छोप्यो।
१०) लेख्दै छु ..
Posted on 09-19-20 9:32 AM [Snapshot: 2199] Reply [Subscribe]